लगातार तीन खेल जित्दै नेपाल फाइनल प्रवेश, कसको योगदान कति ? - Nepalese Times
लगातार तीन खेल जित्दै नेपाल फाइनल प्रवेश, कसको योगदान कति ?
Nepalese Times March 31, 2022 (1 Month ago) 1451 Views
काठमाडौं । नेपाल घरेलु मैदानमा भइरहेको त्रिकोणात्मक टी २० श्रृंखलाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पपुवा न्यूगिनीलाई ३७ रनले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको हो ।
दीपेन्द्र सिंह ऐरी र डेब्यु ब्वाए आदिल अन्सारी अनी करण केसीले ह्याट्रिक सहित ५ विकेट लिएपछि बिहीबार कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पीएनजीलाई ३७ रनले हराउन सफल भएको हो ।
करणले अन्तिम ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार विकेट लिएका थिए। टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि नेपाली बलरले लिएको यो पहिलो ह्याट्रिक हो ।
नेपालले पहिलो खेलमा पीएनजीलाई १५ रनले र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । लगातार तीन खेल हारेको पीएनजीले शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ । फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पीएनजीले मलेसियालाई हरानुपर्नेछ । नेपालले लिगको अन्तिम खेल शनिवार मलेसियासँग खेल्नेछ ।
नयाँ बल बलिङ गरेका करण केसीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दा लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पीएनजीले दुवै ओपनरलाई व्यक्तिगत एक रनमा गुमायो । लेगा सिएकालाई पहिलो ओभरमा करण केसीले आसिफ शेखबाट क्याचआउट गराए ।
यो विकेटसँगै करणले टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ५० विकेट पूरा गरे । यस्तै तेस्रो ओभरमा कप्तान असद भालाई पनि करणले सोमपाल कामीबाट क्याचआउट गराउँदा पीएनजीले १३ ओभरमा २ विकेट गुमायो ।
त्यसपछि चार्ल्स अमिनी र टोनी उराले इनिङ्स सम्हाल्दै तेस्रो विकेटका लागि ८४ रनको साझेदारी गरे । सोमपाल कामीले यो साझेदारी तोड्दै दुवैलाई आउट गरे ।
सोमपालले १२औं ओभरामा ४३ रन बनाएका उरालाई आउट गरे । त्यसपछि १४औं ओभरमा अमिनीलाई आउट गरे । दुवैलाई कुशल भुर्तेलबाट क्याचआउट गराए । अमिनीले ४७ बल खेल्दै ९ चौका प्रहार गरे ।
त्यसपछि नोर्मन भानुअ र सेस बाउले पीएनजीको इनिङ्सलाई अघि बढाएका थिए । तर १८औं ओभरमा अविनाश बोहराले दुवैलाई आउट गरेपछि पीएनजीले १५८ रनमा ६ विकेट गुमायो । अविनाशले १७ रन बनाएका भानुअलाई उक्त ओभरको दोस्रो बलमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीबाट क्याचआउट गराए भने तेस्रो ओभरमा बाउलाई बोल्ड गरे ।
रिले हेकुरे ७ रन बनाएर १९औं ओभरको अन्तिम बलमा बउट भए । उनलाई नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले करण केसीबाट क्याचआउट गराए ।
यस्तै अन्तिम ओभरमा करणले ह्याट्रिक विकेट लिए । उनले उक्त ओभरको दोस्रो २ रन बनाएका चाड सपरलाई रोहित पौडेलबाट क्याचआउट गराए । यस्तै तेस्रो बलमा सिमोन अटाईलाई बोल्ड गरे । चौथो बलमा नोसाइन पोकनालाई दीपेन्द्रबाट क्याचआउट गराए ।
बलिङमा नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले ४ ओभरमा समान ३४ रन खर्चेर २(२ विकेट लिए । यस्तै कप्तान सन्दीपले १ विकेट लिन ४ ओभरमा ३७ रन खर्चिए ।
त्यसअघि दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक प्रहार गरेपछि नेपालले कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ७ विकेट गुमाएर २०३ रन बनाएको थियो ।
चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका दीपेन्द्रले ३३ बल खेल्दै ३ चौका र ४ छक्का मद्दतमा सर्वाधिक ६६ रन बनाए । यसै खेलबाट टी२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका आदिल अन्सारीले आक्रमक ब्याटिङ गर्दै ३१ रन बनाए । उनले ११ बल खेल्दै १ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे ।
दीपेन्द्रले १९औं ओभरको अन्तिम बलमा आउट हनुअघि ४ ओभर ४ बलमा आदिल अन्सारीसँग मिलेर ७६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
यस्तै रोहित पौडेलले ४१, आसिफ शेखले ३८ र कुशल भुर्तेलले १७ रन जोडे ।
ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले पावर प्लेमा ४४ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई गतिलो सुरुवात दिलाएका थिए । तर सातौं ओभरको दोस्रो बलमै उक्त साझेदारी तोडियो । कुशल भुर्तेल २० बलमा १७ रन बनाएर आउट भए ।
आसिफ शेख दशौँ ओभरमा आउट भए । आसिफले २९ बल खेल्दै ४ चौका र १ छक्का मद्दतमा ३८ रन बनाए । त्यसपछि रोहित पौडेल र दीपेन्द्रले नेपालको इनिङ्स अघि बढाए ।
तेस्रो विकेटका लागि दीपेन्द्र र रोहितले ५१ रनको साझेदारी गरे । रोहितले २३ बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्का मद्दतमा ४१ रन बनाए ।
चौथो विकेटका लागि दीपेन्द्र र आदिल अन्सारीले ७६ रनको साझेदारी गरे । दीपेन्द्र १९औं र आदिल २०औं ओभरमा आउट भए । १९औं ओभरमा ३२ रन जोडेको नेपालले अन्तिम ओभरमा ३ विकेट गुमाएर जम्मा ४ रन मात्र जोडेको थियो । बलिङमा पीएनजीका कबुअ मोरेअले ३, रिले हेकुरेले २ नोर्मन भानुअले १ विकेट लिए ।